नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकता किन ? — Motivatenews.Com
नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकता किन ?
काठमाडौं – नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादका विषयमा वहस हुन थालेको धेरै भएको छ । समाजबादी व्यवस्था स्थापनाकै लागि हजारौंले बलिदानी दिएका छन भने हजारौं अंग भंग भएका छन । के हो त यो बैज्ञानिक समाजवाद ? किन चाहियो नेपालमा बैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ? यसको उत्तर यहाँ भेटाउन सकिन्छ ।
१) निजी सम्पत्तिको अन्त्यको लागि
२) जातीय उत्पीडनबाट मुक्ति पाउनको लागि
३) वर्गीय उत्पीडनबाट मुक्ति पाउनका लागि
४) लैङ्गिक विभेदबाट मुक्ति पाउन लागि
५) प्रत्येक व्यक्तिले क्षमता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको दाम पाउनका लागि
६) दिनमा तीन छाक खान पाउने ग्यारेन्टी गर्न
७) सरकारबाट निशुल्क उपचारको ग्यारेन्टीका लागि
८) निशुल्क रुपमा उच्च शिक्षा प्राप्तिको लागि
९) बसोबासको निम्ति घरको ग्यारेन्टीको लागि
माथिका कुराहरुबाट के स्पष्ट हुन्छ भने समाजवाद आयो भने जनताले के खाउँला ? के लाउँला ? कहाँ बसौला ? भन्ने चिन्ताको अन्त्य हुन्छ । समाजमा निजी स्वामित्वको अन्त्य हुन्छ र उत्पादनका साधनहरुमा सबैको हक बरावर हुन्छ । मानव इतिहासमा मानिसद्वारा मानिसको शोषण गरिने व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।
बैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा काम नगरी बस्न पाइदैन । उत्पादनको क्षेत्रमा जुनसुकै काम गरेपनी यो व्यवस्थामा सबै व्यक्ति श्रमिक हुन्छन । यो व्यवस्थामा लोग्ने र स्वास्नी मानिसबिचको असमानताको अन्त्य हुन्छ भने पुजिबादी वा संसदबादी समाजमा भन्दा समाजवादी व्यवस्थामामा विकासको गति अत्याधिक तिब्र हुन्छ ।
आज बिश्वको पुजिबादी वा सामान्तबादी युगमा मानिसहरु भोक्भोकै मरिरहेका छन । ओत लाग्ने ठाउँ नपाएर सडकको पेटिहरुमा सुतिरहेका देख्छौ । लाखौलाख शिक्षित युबाहरु बेरोजगार भएर भौतारिरहेका देख्छौ । यी दुर्गुणहरु पुजिबादी समाजबादका अनिवार्य परिणाम हुन ।
त्यसैले यी दुर्गुणबाट मुक्त हुन समाजवादी व्यवस्थामा नपुगी हुदैन र मुक्ती पनि पाइदैन । त्यसैले समाजबादको बाटो नै स्थायी शान्ती र सुखको बाटो हो । यो दिशामा जानको लागि विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाको राजनैतिक कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ती बाहेक अर्को बिकल्प देखिदैन ?
२०७६ साउन १ गते प्रकाशित